by UAlexis Jones
Esi sifundo sinika abafundi ithuba lokusebenzisa iingxaki zebali ngokuzifundisa ukuba bazibhalele zabo njani kwaye zixazulule iingxaki zabantwana abafunda nabo.
Iklasi: ibanga lesi-3
Ubude bexesha: 45 imizuzu kunye namaxesha eklasi ezongezelelweyo
iipensele okanye imirayrayoni
Isigama esiluncedo: iingxaki zebali, izivakalisi, ukongeza, ukukhupha, ukuphindaphinda, ukwahlukana
Iinjongo: Abafundi baya kusebenzisa ukongeza, ukukhupha, ukuphindaphinda, kunye nokwahlula ukubhala nokulungisa iingxaki zebali.
Imilinganiselo ihlanganiswe : 3.OA.3. Sebenzisa ukuphindaphinda kunye nokwahlukana phakathi kwe-100 ukujongana neengxaki zegama kwiimeko ezibandakanya amaqela alinganayo, izixhobo kunye nokulinganisa ubuninzi, umzekelo, ngokusebenzisa imidwebo kunye nokulingana nesimboli yenombolo engaziwayo ukumela ingxaki.1
Isifundo Isingeniso: Ukuba iklasi yakho isebenzisa incwadi yesifundo, khetha inkathazo yembali kwisahluko esandula ukuvakalisa abafundi ukuba bafike kwaye bayisombulule. Batsho ukuba ngeengcamango zabo, babenokubhala iingxaki ezingcono, kwaye baya kwenza njalo kwisifundo samhlanje.
Tshela abafundi ukuba iinjongo zokufunda kwesi sifundo ziyakwazi ukubhala iingxaki zembali ezinomdla kunye nenselele kubafundi bafunda nabo ukuxazulula.
Umzekelo omnye ngxaki kubo, usebenzisa igalelo labo. Qala ngokucela amagama amabini abafundi ukuba basebenzise kwingxaki. "Desiree" kunye "Sam" iya kuba yimizekelo yethu.
Yintoni i-Desiree noSam abakwenzayo? Ukuya echibini? Ukutya sasemini yokutyela? Ukuthenga ukutya? Abafundi mababekele indawo, njengoko ubhala phantsi ulwazi.
Yenza izibalo xa zigqiba oko kwenzekayo kwibali. Ukuba i-Desiree noSam bafumana isidlo sasemini kwivenkile yokudlela, mhlawumbi bafuna ezine i-pizza, kwaye iqela ngalinye li $ 3.00. Ukuba ngaba bathengisa ukutya, mhlawumbi bafuna iipulo ezintandathu kwi $ 1.00 nganye. Okanye iibhokisi ezimbini zabaphangi kwi-3.50 nganye.
Emva kokuba abafundi bexubushe ngeziganeko zabo, mzekelo kubo ukuba babhale njani ukulingana. Kulo mzekelo ukhankanywe ngasentla, ii-pizza ezi-4 ze-pizza X $ 3.00 = "X" okanye nayiphi na into engaziwayo ongathanda ukuyibonisa.
Nika abafundi ithuba lokuzama ezi ngxaki. Kuqheleke kakhulu ukuba benze isimo esihle kakhulu, kodwa wenze iimpazamo kwi-equation. Qhubeka usebenza kulezi zide zikwazi ukuzakhela kunye nokuxazulula iingxaki zabo ezifunda nabo.
Umsebenzi wesikolo wasekhaya / Uvavanyo: Umsebenzi wesikolo, cela abafundi ukuba babhale ingxaki yabo ibali. Ngetyala elingaphezulu, okanye nje ukuzonwabisa, cela abafundi ukuba baquke amalungu omndeni kwaye bafumane wonke umntu ekhaya ukuba abhale ingxaki. Yabelana njengeklasi ngosuku olulandelayo - kumnandi xa abazali bebandakanyeka.
Ukuvavanya: Ukuhlolwa kwesi sifundo kunakho kwaye kufuneka kuqhubeke. Gcina ezi ngxaki zebali ziboshwe kwibhinki emithathu kwiziko lokufunda. Qhubeka ukongeza kuyo njengabafundi babhala iingxaki ezininzi kunye neengxaki. Yenza iikopi zeengxaki rhoqo kwixesha, kwaye uqokelele la maxwebhu kwipotifoliyo yomfundi. Ngolunye ukhokelo, bayaqinisekiswa ukubonisa ukukhula kwabafundi ngexesha elide.
I-Algrab Number Problem Worksheets ngeempendulo
IiNombolo zeeNkcazo zeeNcwadi. Inqaku leNombolo
Isicwangciso seSifundo: Ukongeza kunye nokuKhupha ngeZithombe
IsiKharityhulam seMatriki yeBakala lesi-10
9 Iifom zokusebenzela zokuLula iZahluko kwi-6 Graders
Iingxaki zeNKrisimesi zeZithenga
Izizathu Zokuba Izilwanyana Ziba Ngengozi
I-Adventure kwiKangchenjunga: Ukunyuka kwi-Roof of India
Yintoni abaTitshala beSikolo soBucala abafumanayo?
Gwema ubuhlungu ngeendawo ezifanelekileyo zeMandla kunye neMpahla yePiano
AbaCwangcisi beMifanekiso kwiMathe